बिहान सबेरै उठ्नु निकै फाइदा, स्वस्थ, धनी र बुद्धिमान बनाउँछGandaki Press
‘अर्ली टु बेड अर्ली टु राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एण्ड वाइज’ । अंग्रेजी भाषाको यो भनाई निकै पुरानो हो । जसको अर्थ यो हो कि बिहान सबेरै उठ्नु निकै फाइदाजनक छ । यो बानीले मानिहरुलाई स्वस्थ, धनी र बुद्धिमान बनाउँछ ।
एप्पल कम्पनीका सिइओ टिम कुक बिहान पौने चार बजे उठ्छन् । फिएट कम्पनीका सिइओ सर्जियो मार्शियान बिहान साढे तीन बजे र चर्चित बेलायती व्यापारी रिचर्ड ब्रेनसन बिहान पौने ६ बजे उठ्छन् ।
सबैलाई थाहा छ, यी व्यक्ति निकै सफल छन् तर के उनीरुको सफलताको राज बिहान चाँडै उठ्नुमा लुकेको छ ?
बिहान सबेरै उठ्ने सबै मानिसहरु जीवनमा अत्यधिक सफल हुन्छन् त ?
बिहान चाँडै उठ्नुका विभिन्न फाइदा छन्, यसमा दुई मत छैन । सबेरै उठेर व्यायाम गरेर, नाश्ता गरेर, अफिसका लागि तयार भएर आफ्ना केही कामसमेत गर्न भ्याइन्छ ।
त्यसो भए जो मानिस अबेरसम्म सुत्छन्, उनीहरु सफल हुँदैनन् त रु जो ढिला उठ्छन् उनीहरुको काम अधुरा हुन्छन् रु के साँच्चै नै ढिला गरी उठ्ने मानिसहरु न त सफल हुन सक्छन्, न स्वस्थ नै ?
यदि तपाईंले पनि यस्तै साच्नुहुन्छ भने यसलाई आफ्नो मन मस्तिष्कबाट निकालिदिनुहोस् । किनभने एक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ कि संसार दुई हिस्सामा बाँडिएको छ । आधा जनसंख्या यस्ता छन् जसलाई बिहान चाँडै उठ्न मनपर्छ । अन्य मानिस भने ढिलासम्म सुत्न र राती अबेरसम्म जागा बस्न रुचाउँछन् । अब यस्तो त होइन कि अबेरसम्म सुत्ने संसारको आधा जनसंख्या असफल छन् ।
संसारभरीको जनसंख्यामध्ये एक चौथाई मानिस यस्ता छन् जसलाई बिहान चाँडै उठ्न मनपर्छ । यस्तै लगभग यति नै मानिसहरु राती अबेरसम्म जागा बस्न रुचाउँछन् । अनुसन्धानबाट पत्ता लागेअनुसार बिहान चाँडै उठ्ने मानिसहरुको सहयोगी भावना अलि बढी हुन्छ । उनीहरु कुनै पनि घटनाको सही विश्लेषण गर्न सक्छन् । उनीहरुको तुलनामा राती अबेरसम्म जागा बस्नेहरु कल्पनाशीलताको मामलामा बाजी मार्ने गर्छन् । उनीहरु धेरैजसो एक्लै बस्न रुचाउँछन् ।
बिहान चाँडै उठ्नुका फाइदा:
जबर्जस्ती बिहान उठ्नुका हानी:
यदि कसैलाई जबर्जस्ती उसको बडी क्लकविरुद्ध सबेरै उठ्न र अबेर रातीसम्म जागा हुन भनिएको खण्डमा यसको असर नकारात्मक नै हुन्छ । शरीरसँग जबर्जस्ती गर्नु कुनै पनि हालतमा फाइदाजनक हुँदैन । क्याथरिन मानिसहरुलाई आफ्नो सिर्काडिय क्लक अर्थात् शरीरको जैविक घडीको हिसाबले चल्न दिँदा उनीहरुको क्षमतामा वृद्धि हुने बताउँछिन् ।
अबेर रातीसम्म जागा हुने व्यक्तिलाई बिहान चाँडै उठ्न बाध्य बनाउनुहुन्छ भने ऊ पक्कै पनि अल्छी नै हुनेछ । काममा उसको कमै मन लाग्नेछ । उसले दिमागको पनि राम्रोसँग उपयोग गर्न सक्दैन । उसको तौल बढ्नसक्छ । स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ ।
क्याथरिन वुल्फका अनुसार बिहान चाँडै उठ्ने र अबेर रातीसम्म जागा बस्ने बानी मानिसहरुले आफ्नो आमा–बुवाबाट अनुसरण गर्छन् । यो हाम्रो डिएनएमा नै हुन्छ ।
तर उमेरसँगै हाम्रो यो बानीमा परिवर्तन पनि आउन सक्छ । बच्चाहरु धेरैजसो बिहानै उठ्छन् । २० वर्षपछि अबेरसम्म जागा हुने बानी लाग्न सक्छ । पचास वर्ष पुग्दासम्म यो बानी पुन: बिहान चाँडै उठनेमा परिवर्तन हुनथाल्छ ।
रातभरी जागा बस्ने पनि हुन्छन् सफल:
हरेक सफल व्यक्ति बिहानै उठ्छन् भन्ने छैन । बक्स कम्पनीका सिइओ आरोन लेवी, बजफिडका सिइओ जोनाह पेरेटी, आयरल्याण्डका उपन्यासकार जेम्स जोयस, अमेरिकी लेखिका गट्रूडे स्टेन, फ्रेन्च उपन्यासकार गुस्ताव फ्लोबर्ट, यी सबै अबेरसम्म सुत्ने गर्थे र रातभरी जागा बस्थे ।
अहिलेसम्म कुनै पनि अनुसन्धानले बिहान चाँडै उठ्ने मानिस जीवनमा सफल भएरै छोड्छन् भनेर पुष्टि गरेको छैन । तपाईंको शरीरको हर्मोन धेरैजसो तपाईंको बडी क्लकको हिसाबले रिलिज हुन्छ । बानी परिवर्तन गर्दा हर्मोनको तालमेल बिग्रन सक्छ किनभने राती अबेरसम्म जागा हुने मानिस बिहान चाँडै उठ्दा उसको शरीरले यहि सोच्छ कि ऊ सुतिरहेको छ । उसको हर्मोन अबेर गरी रिलिज हुनेछन् । यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नसक्छ ।
तर धेरैजसो देशमा अबेरसम्म सुत्नेहरुलाई अल्छी, कामचोर भनिन्छ । त्यसकारण धेरैजसो मानिसहरु बाध्यतामै भएपनि बिहान चाँडै उठ्ने कोसिस गर्छन् ।
हो, बिहान चाँडै उठ्नुका फाइदा धेरै छन् । तपाईंले प्राकृतिक प्रकाश पाउनुहुन्छ । सूर्यको प्रकाशमा बस्दा तपाईंको शरीरले भिटामिन डीको भरपुर खुराक पाउँछ । तपाईं केही काम चाँडै सिद्धाउन सक्नुहुन्छ ।
तर यदि तपाईंलाई अबेरसम्म सुत्न मज्जा लाग्छ भने ब्ल्याङ्केट तान्नुहोस् र आरामले सुत्नुहोस् ।
यसरी चिसो छल्न सकिन्छ, यी उपाय अपनाउनुहोस्
यसकारण युटुवले लाखैं एकाउन्ट हटायो